အီတလီနိုင်ငံတွင် ကလေးငယ် ၁၈၀ ဦးအပါအဝင် ဒုက္ခသည် ၄၅၀ ဦး ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြောင်း UNHCR ပြော - Xinhua News Agency
ကလေးငယ် ၁၈၀ ဦးပါဝင်သော အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များအား ဂျာမန် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း Sea Watch က ကယ်ဆယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အီတလီနိုင်ငံ Sicily ကျွန်းရှိ ထရာပါနီဆိပ်ကမ်းတွင် ချပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မေ ၁ ရက် နံနက်အစောပိုင်းကတည်းက အီတလီနိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ၁,၅၀၀ ခန့် ကိုကုန်းပေါ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု UNHCR ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Carlotta Sami က ပြောခဲ့သည်။
“ရောက်ရှိလာသူအများစုက လစ်ဗျားကနေ အလွယ်တကူပျက်စီနိုင်ပြီး လှိုင်းဒဏ်မခံနိုင်တဲ့ ရေယာဉ်တွေနဲ့ ထွက်ခွာလာကြပြီး ဘေးအန္တရာယ်တွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ကျရောက်နေတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ဥရောပဆီဦးတည်ကာ မြေထဲပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်းလာသည့် ဒုက္ခသည်အရေအတွက်မှာ သိသိသာသာများပြားလျက်ရှိပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံ၌ လူပေါင်း ၁၀,၄၀၀ ဦး ရောက်ရှိလာခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပထမငါးလပမာဏထက် ၁၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပင်လယ်ထဲတွင် လူပေါင်း ၅၀၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အလားတူကာလအတွင်း ၁၅၀ ဦး ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း UNHCR က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အီတလီနိုင်ငံတွင် ဒုက္ခသည်လှေများဖြင့် ရောက်ရှိလာသူများစွာအကြား “ကလေးတွေအရေအတွက် မြင့်မားလာတာကို ကျွန်မတို့ သတိပြုမိပါတယ်။ သူတို့ထဲက အတော်များများက အဖော်မပါကြဘူး” ဟု Sami က ဆိုသည်။
မာလီနိုင်ငံ၊ အီရီထရီယားနိုင်ငံ၊ ဆာဟာရဒေသနှင့် မြောက်အာဖရိကမှ ဒုက္ခသည်များစွာမှာ “စစ်ပွဲတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကနေ ထွက်ပြေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံရှိ အခြေအနေမှာ ဆိုးရွားလျက်ရှိကြောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသရန် တိုက်တွန်းထားသလို ဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေးခြင်းအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး ကာကွယ်မှုနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာ ဘေးကင်းစိတ်ချရသော လမ်းကြောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကို တိုက်တွန်းထားကြောင်း UNHCR က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-05-05 09:51:43|Editor: huaxia
GENEVA, May4(Xinhua) — The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) announced Tuesday that 450 refugees were rescued and sent to Italy.
“Since the early hours of Saturday 1 May, some 1,500 persons have disembarked in Italy,” UNHCR spokesperson Carlotta Sami said.
Among the several disembarkations in Italy, “we have noticedahigh presence of children, many of whom are unaccompanied,” said Sami.
Many of the refugees came from Mali, Eritrea, the Sahel region and North Africa, “fleeing from war and conflicts,” she said.
The situation in Libya is bound to deteriorate, said UNHCR, urging European Union countries to show solidarity and calling on the international community to provide better protection and alternative, safer paths for fleeing refugees. Enditem
Photo taken on Jan. 7, 2018 shows rescued illegal immigrants atanaval base in Tripoli, Libya. Libyan naval rescued 297 illegal immigrants on Sunday and recovered two bodies off the coast of the western city of Garrabulli, some 60 km east of the capital Tripoli. (Xinhua/Hamza Turkia)